डा. युवराज खतिवडा Archives - Lokpati.com
Tag - डा. युवराज खतिवडा
बैंकले अटेर गरे कर्जाकाे ब्याजदर सरकारले ताेक्छ
काठमाडौं। मेरो केन्द्रीय बैंकमा काम गरेको अनुभवमा २० वर्ष जति बैंकिङ क्षेत्रमै बिताएँ। मेरो शुरुदेखि नै मान्यता के हो भने सरकारी स्तरमा कुनै न कुनै रुपमा एउटा वित्तीय संस्था रहनु पर्छ। र, त्यो एउटा बैंक रहनूपर्छ।
‘हेर्दै जानुस्, अर्काे वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा चमत्कार हुन्छ’
काठमाडौं। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपालको नारा दियो र पहिलो कार्यवर्षलाई यसको आधार वर्ष भन्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयन र विकासका लागि आधार तयार भयो त ? तपाईंको अनुभवले के बताउँछ ?
यो सरकार निर्माण हुँदा हामीले विकास र सुशासनका...
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अर्थ राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं, ६ कात्तिक । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सी.मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूहको बोर्डस अफ गभर्नरहरूको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई आज स्वदेश फिर्ता भएका...
काठमाडौं, ३१ भदाै। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘अहिले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय’ भएको टिप्पणी गरे लगत्तै लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजार आज एकाएक बढेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको ५८ औँ वार्षिकोत्सवका...
राजश्व चुहावट गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडाैं, १० भदाै। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट र अपचलनमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति जेल जानुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा...
सरकारले घाटाकाे नीति लिँदैन : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं, १० भदाै । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले घाटाको नीति नलिने बताएका छन् । उनले व्यवसायीले घाटाको व्यापार नगरेजस्तै सरकारले पनि घाटाको नीति नलिने बताएका हुन् ।
मंगलबार नाडा अटो शो २०१९ को उद्धघाटन गर्दै उनले...
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र चिनियाँ राजदुत यान्कीबीच भेटवार्ता
काठमाडाैं, ४ भदाै । चीनका राजदुत होउ यान्की (Mrs. Hou Yanqi) र माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएकाे छ। राजदुत यान्की र मन्त्री खतिवडाबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएकाे हाे।
भेटघाटको क्रममा चिनियाँ...
काठमाडौं, २९ साउन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण भएको बताएका छन् ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत साईद हमदास अलनाकवी बीचको शिष्टाचार...
नयाँ बजेट : सुनचाँदी बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने
काठमाडौं। सरकारले सुनचाँदीलाई पनि बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने नियम बनाएको छ । आज नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्ताे नियम घोषणा गरेका हुन् ।
वित्तिय पहुँच अभिबृद्धि, ठूला बैंकलाई पनि एक...